White House kwadoro nkwado ndọrọ ndọrọ ọchịchị US na Beijing Olympics
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Egwuregwu » White House kwadoro nkwado ndọrọ ndọrọ ọchịchị US na Beijing Olympics
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa ozi China • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Egwuregwu • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Mkpebi ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka ga-ekwe ka ndị na-eme egwuregwu America na-asọmpi na n'ikpeazụ agaghị emetụta usoro egwuregwu ahụ, ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu America na-akwado ihe kpatara ya, na-ekwupụta na mmeso Beijing na-emeso ndị Alakụba Uyghur bụ 'ihe jọgburu onwe ya.'
White House Ọnụ na-ekwuchitere Jen Psaki kwuputara taa na United States ga-eji ndọrọ ndọrọ ọchịchị wepụ ihe na-abịa Beijing 2022 Winter Olympic Games na Paralympic na China.
"Ndị ọchịchị Biden agaghị ezigara ndị nnọchi anya ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ ndị ọrụ gọọmentị ọ bụla Olimpik oyi nke Beijing 2022"Jen Psaki kwuru, na-ekwupụta na mkpebi a anaghị ekpuchi ndị egwuregwu US ga-enwere onwe ha ịga asọmpi na Beijing.
Ọ nweghị onye isi ala America wezugarala asọmpi Olympic kemgbe Jimmy Carter kwụsịrị asọmpi Moscow na 1980.
White House Ọnụ na-ekwuchitere kwuru na Team USA nwere 'nkwado zuru oke' nke nchịkwa, na nchịkwa ahụ ga-agbanye mgbọrọgwụ n'ụlọ.
Mgbe ọ na-ekwe nkwa ịkasi ndị na-eme egwuregwu America na-asọmpi, Psaki kwara arịrị na izipu ndị nnọchi anya ga-emeso egwuregwu Olympic dị ka ọ na-emebu, na United States 'naanị enweghị ike ime nke ahụ,' na-ekwu maka mmebi ikike mmadụ nke Beijing, gụnyere' mgbukpọ na mpụ megidere mmadụ.'
Beijing tụrụ egwu 'mgbochi ndị siri ike' na mbido Mọnde ma ọ bụrụ na gọọmentị Biden kwuwapụta mkpesa ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke asọmpi Olympic Winter.
Onye na-ekwuchitere Mịnịstrị na-ahụ maka mba ofesi China Zhao Lijian kwukwara na Beijing ga-ewere mmegharị a dị ka "mkpasu iwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị;/" n'oge mkparịta ụka na Mọnde. Ọ jụrụ ịnye nkọwa gbasara etu China nwere ike isi meghachi omume na ntakịrị.